Ahoana ny fomba ametrahan'ny orinasa mpiasa sy teti-bola ho an'ny fiaraha-monina | Martech Zone
Ahoana ny fomba amaritan'ny orinasa mpiasa sy teti-bola ho an'ny fiaraha-monina
Alakamisy, Desambra 19, 2013 Douglas Karr
Wildfire sy Ad Age dia nanao a fanadihadiana manontany 500 mahery varotra orinasa mpitantana sy mpanatanteraka momba ny fomba fanaony amin'ny marketing ara-tsosialy. Nianatra izy ireo izay ataon'ny marika tsara indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fampidirana mpijery, ary koa ny ataon'ireo izay mitolona amin'ny fiarahamonina.
Tsy safidy ho an'ny orinasa intsony ny haino aman-jery sosialy, ilaina ny mitazona sy miaro ny tsy fivadihan'ny marikao amin'ny Internet. Manomboka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ka hatramin'ny varotra dia afaka mahita ny indostria rehetra amin'ny Internet ianao - manadihady ny fividianany manaraka ary manaparitaka ny teny farany. haingana manasongadina ireo fisongadinana ireo:
45% amin'ireo orinasa manana fidiram-bola mihoatra ny $ 1 lavitrisa manana mpiasa 50 mahery natokana ho an'ny media sosialy.
Ny marketing, PR, ary ny traikefan'ny mpanjifa no ekipa voalohany manana ny anjarany amin'ny fiarahamonina, nefa misy fiatraikany amin'ny ekipa 10 manerana ny orinasa.
68% amin'ireo orinasa manantena ny hampiakatra ny fandaniana ara-tsosialy amin'ny teti-bolam-bola manaraka, izay manondro fa ny andraikitry ny fiarahamonina amin'ny fifangaroana amin'ny varotra dia ekena sy omena lanja.
Tags: 2013fomba fitenyteti-bolaorinasaGoogle +manao ahoana ny teti-bolan'ny marikahaino aman-jery sosialytetibola media sosialystaffingny fanjakan'ny fiaraha-moninafampiharana wildfireFampiharana afo